Hoyga Barashada Tawxiidka - (5) Diintu danaha dadka ma ka hor timaaddaa?
1) dadku markay aalad ku cusub helaan, waxa u horreeya, oo ay gartaan waxaa weeye, in la akhriyo warqadda caddaynta ah, ee la socota aaladda, si ay u gartaan: ujeeddada loo sameeyey, waxtarkeeda, qaabka loo adeegsado, cilladaha ku iman kara, iyo sida loo cillad bixiyo.
Laakiin iyagoo isu qiraya, inay yihiin sanco iyo farsamo Rabbi, ma ay gartaan inay si dhab ah u diraaseeyaan, caddaynta la soo raacsiiyey aadanaha, ee ka warramaysa: dadka waxa laga abuuray, ujeeddada loo abuuray, waxa uu ku gaari karo nabad Adduun iyo mid Aakhiro, Nidaamka iyo shareecada ku munaasibka ah noloshiisa, iyo waxa sugaya dhimasho ka dib.
Garasha la’aantaa uu garan waayey, inaan xal u helidda arrimihiisa, looga maarmi karin, Rabbigii farsamadiisa iska lahaa, sida aalad walba, aan ogaalka arrimaheeda, looga maarmi karin, kii soo sameeyey……. garasha la’aantiisaa, baa ku tusaysa, dadku inuu dantiisa garan waayo, isagoo weliba si daran u raba, inuu nolol fiican gaaro.
2) dadku danaha ay dareemaan, una qayliyaan, waxaa ka mid ah, helitaanka cunnada, cabbitaanka, hoyga, iyo wehel jinsiga kale ah. Haddiise loo daayo siday rabaan, waxay bannaysanayaan cunno iyo cabbitaan, caafimaadkooda iyo caqligooda wax u dhimaya.
Wehelkana waxay ku doonaan, jid xun, oo bulsha weynta u soo jiidaya, burbur iyo is nacayb, iyo dhashii oo weyda qoys is waafaqsan, oo ku wada jooga guur xalaal ah.
3) maa daama uu xaalka dadku sidaa yahay, isaguna is bi’inayo, buu sharciga “Allaah”, nolosha dhexdeeda ka xarrimayaa, wax badan oo dadka qaarki moodayaan, in dano ay lahaayeen Diintu ka hortaagan tahay, waase iyaga garaad yaridooda, iyo fiira gaabnidooda.
Wuxuu xarrimayaa kufriga noocyadiisa oo dhan, oo ay sharci dejinta dadku ka mid tahay. Wuxuu xarrimayaa khansiirka, ribada, khamrada, maan dooriyoo dhan, khammaarka, zinada, nasab duridda, iyo in dhalasha lagu faano, ama dad lagu xaqiro.
Wuxuu Rabbi yiri:"وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ" (المؤمنون:71)
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (النحل:90)
"يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" (الأعراف:157)